That's so good, right?: Finding Mother
စိုးစိုးက ကျွန်တော်တို့အခန်းရဲ့ ဘေးကအခန်းကို
ပြောင်းလာတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ သူမက ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ အရှိန်အ၀ါ၊ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်မှု၊ အရပ်ရှည်သွယ်မြင့်မားမှုအပြင် နုညံ့တဲ့ဆံနွယ်ရှည်ရှည်တွေပိုင်ဆိုင်သူပါ။ အမြဲတစေ ခပ်မြင့်မြင့် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေနှင့် ကိုယ်လုံးအလှပေါ်လွင်စေတဲ့ အ၀တ်အထည်တွေကို ၀တ်ဆင်တတ်ပါတယ်။
ကြည့်လိုက်ရင် မိတ်ကပ်နည်းနည်းများပြီး ရေမွှေးနံ့က ပူထူနေတာပဲ။
အစကနဦးတော့ ကျွန်တော်တို့စကားသိပ်မပြောဖြစ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မကြာခဏလှေကား အတက်အဆင်းမှာ တွေ့ဆုံမိတတ်လေ့ရှိပြီး သူမက ကျွန်တော့်ကိုနုညံ့သောအပြုံးဖြင့် 'မင်္ဂလာပါ' လို့ ခပ်တိုးတိုးနှုတ်ဆက် လေ့ရှိပါတယ်။
သောကြာနေ့ညတစ်ညမှာ ကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့ ညအိပ်ချိန်ထွန်းတဲ့မီးအိမ်နှင့်အတူအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အိပ်ကပ် တွေထဲ တံခါးသော့ကို ဟိုနှိုက်ဒီနှိုက်ရှာဖွေရာ မီးအိမ်ဟာ လက်ထဲကလျှောကျပြီး အသံကျယ်ကျယ်ကို ရုတ်တရက်
ဖန်တီးလိုက် သလိုဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ အိမ်နီးချင်းရဲ့ တံခါးပွင့်ဟလာပြီးစိုးစိုးတစ်ယောက် အလန့်တကြားမျက်နှာနှင့် ရပ်နေတာကို မြင်လိုက်ရပါရဲ့။
'ဟေ့...မင်း..အိုကေရဲ့လား?' သူမက လှမ်းမေးတယ်။
'ဟုတ်ကဲ့....အဆင်ပြေပါတယ်၊ ဆောရီးဗျာ လန့်အောင်လုပ်မိသွားရင်'
'အို..ရ့ပါတယ်၊ မင်း အနာတရ တစ်ခုခုမဖြစ်တာပဲ ၀မ်းသာလှပါပြီကွယ်' သူမနှုတ်ဖျားမှာ အပြုံးချိုချို တွဲခိုရင်းပြောပါတယ်။
ကျွန်တော့် အိပ်ကပ်တွေအားလုံးနှိုက်ပြုရှာဖွေပေမဲ့ သော့တစ်ချောင်းမှမတွေ့။ ကျွန်တော့် အိမ်သော့မယူဘဲ လော့ခ်ျလုပ်ပြီး အပြင် ထွက်သွားမိတာပဲ။
သော့ပိုတစ်ချောင်းပေးထားတဲ့ သူငယ်ချင်းကလည်း သူ့မိဘအိမ်ခဏပြန်သွားတာနောက်နေ့မှပြန်လာမှာ။
'အင်း....ကျွန်တော် အိမ်ထဲမှာ သော့တွေမေ့ထားပြီး ပိတ်ခဲ့မိပြီထင်တယ်ဗျ။
သော့အပိုကလည်း နက်ဖြန်မှ သွားယူလို့ရမှာ' ကျွန်တော်
သူမကိုကြည့်ပြီးပြောမိပါတယ်။ သူမကိုကြည့်ရတာ အရောင်စုံနှင့်တောက်ပနေသလိုပဲ။သူမကိုကြည့်လိုက်ရင် ၇၀ပြည့်လွန်နှစ်များကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အထက်တန်းကျကျဖက်ရှင်မျိုးကိုနှစ်သက်ဝတ်ဆင်တတ်ပုံပါ။ အနီရောင်မှာအဖြူရောင်ဘောလုံးပြောက်တွေ ပါတဲ့ ညအိပ်အင်္ကျီရှည်နဲ့ ခြေထောက်ကတော့
တွေ့ရာကောက်စွပ်ထားသလားမသိ အနီရောင် high-heel ဖိနပ်တစ်ရံဖြင့်ပါ။
'သနားစရာ သားရယ်၊ ဒီအချိန်မှ သော့ပြင်သမားခေါ်ရင်လည်း
ဈေးကြီးပေးရတော့မှာ။ စကားမစပ် မာမီ့နာမည်က စိုးစိုးတဲ့။ သားရဲ့အိမ်နီချင်းအသစ်ပေါ့' ကမ်းပေးတဲ့ သူမလက်ကို
ကျွန်တော်ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ လှပပြီး နုညံ့သလို လက်သည်းရှည်များကအနီရောင်။ 'ဟုတ်ကဲ့..ကျွန်တော်က ဇေယျသူပါဗျ' ကျွန်တော်သတိပြုမိတာက သူမ နည်းနည်းရေချိန်မှန်နေပုံကိုပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်လိုဖွယ်တော့ကောင်းပါတယ်။
သူမ ကျွန်တော့်ကို စူးစမ်းတဲ့အကြည့်နှင့် ကြည့်နေသေးတယ်။ ပြီးတော့သူမနှုတ်ခမ်းမှာအပြုံးတွေပေါ်လာရင်း 'အထဲဝင်လေကွယ်? သား သော့ပြင်ဆရာမလာခင်စောင့်နေလို့ရတာပဲ။ သူလာမလာတော့ မပြောတတ်ဘူးနော်'
'ကျေးဇူးဗျ၊ မာမီက သဘောအရမ်းကောင်းတာပဲ'
'အထဲဝင်ကွယ်' သူမပြောစကားနောက် ကျွန်တော် သူမတိုက်ခန်းထဲကိုလိုက်ဝင်သွားပါတယ်။
ကျွန်တော် သူမနောက်ကနေ လျှောက်လှမ်းလိုက်တာ သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာနှစ်သက်စရာပါ။ သူမ တိုက်ခန်းက တကယ့်ကိုအပျံစား။ တခြားသောအချိန်ကာလတစ်ခုထဲ လျှောက်လှမ်းနေရသလိုပါပဲ။ ၁၉၇၀ပြည့်လွန်နှစ်များကအပြင်အဆင်များပါ။ နောက်ဆုံးပေါ် တီဗီ အပြားကြီးနှင့် ဒီဗီဒီစက်ကြီးတွေကသာ
ဆိုဖာတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ဖို့ သူမကပြောတယ်။ သူမက
စားပွဲငယ်လေးတစ်ခုဆီလှမ်းသွားရင်း သောက်စရာ ယမကာတစ်ပုလင်းဆွဲလာတယ်။
'တစ်ခုခုသောက်ဖို့ တောင်းဆိုလို့ရမလား သား?'
'ရေခဲ မထည့်ထားတဲ့ ၀ီစကီတစ်ခွက်က သားအကြိုက်ပဲဗျ'
'မာမီ့မှာ Tullamore Dew ပဲရှိတယ်ကွယ်၊ ၀ီစကီသောက်တဲ့သူမဟုတ်တဲ့ Sherryမမတစ်ယောက်ကွ မာမီက'
' Tullamore လဲ အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ'
သောက်စရာခွက်တွေယူပြီး ပြန်လာတဲ့ သူမက ကျွန်တော့်နံဘေးမှာ ၀င်ထိုင်ပါတယ်။
သူမဆီကရနေတဲ့ ရေမွှေးနံ့က ညှို့ယူဖမ်းစား နေသလို ခံစားရတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ အေးဆေးသာယာတဲ့ စကားပြောလေးတွေနှင့် အဓိကပြောဆိုကြရာ သူမ
တတိယမြောက် sherry ခွက်ကိုသောက်ပြီးချိန်မှာတော့ သူမအကြောင်းကိုစတင်ပြောဆိုပါတော့တယ်။ သူမစိတ်ထဲမှာ အမြဲကလေးတစ်ယောက်လိုချင် နေခဲ့တာ။
ဒါပေမဲ့ သူမ မရနိုင်ခဲ့ဘူးလေ။ ဘာကြောင့်ဆို
မိန်းမအစစ်တစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့လို့ပဲ။ သူမဟာ အမျိုးသမီးအစစ်တစ်ယောက်မဟုတ်တာကို ကျွန်တော်သတိထားမိခဲ့သလားတဲ့မေးသေးတယ်။
မရေမရာအတွေးမျိုးတော့ဝင်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြဖြစ်တာပေါ့နော်။ သူမ ကကျွန်တော့်လက်ဖ၀ါးအစုံကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း
'ရိုးရိုးသားသားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိတာ မာမီဝမ်းသာတယ်ကွယ်၊ ဒါပေမဲ့ မာမီလှတယ်လို့ သားမထင်ဘူးလား' တဲ့မေးရဲ့။
'အိုး....မာမီက သိပ်ကို...' သူမနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပြုံးတယ်။ ဟုတ်တယ် သူမဟာ တကယ့်ကိုလှပချောမွေ့သူပါပဲ။
သူမကပြောပြသေးတယ် သူမတစ်ဘ၀လုံး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လိုသာနေထိုင်အသက်ရှင်ခဲ့တာတဲ့။ ဘာခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုမှမလုပ်ခဲ့သလိုဘာဟော်မုန်းဆေးကိုမှလည်း မမှီဝဲ မသုံးစွဲခဲ့ပါဆိုပါတယ်။ သူမရင်သားတွေကလည်း သဘာဝကဖန်ဆင်းပေးထားတာ။ ကျွန်တော်မှတ်မိ သတိထားနေတာကတော့သူမ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေ အကြောင်းပြောနေတော့ ကျွန်တော့်ပါးပြင်တွေဟာရဲတွတ်နီဆွေးကာ ရှက် မိနေခြင်းကိုလေ။ 'အင်း..ဒါဆို
'ကျွန်တော် ....အသက် ၂၁ရှိပြီဗျ၊ နက်ဖြန်ဆို ၂၁နှစ်ပြည့်တာ'
'အို....သားမွေးနေ့က နက်ဖြန်လား မာမီ့အသက်က ၄၀၀န်းကျင်ရှိပြီ။အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူ့အသက်ကို မပြောပြသင့်ဘူးနော် ဟဲ ဟဲ'
'အသက်အရွယ်ထက် အများကြီးနုပါတယ်ဗျာ မာမီက'
'ကျေးဇူး...ဇေယျ...သားက အတော်စကားပြောတတ်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ မာမီကသားအမေအရွယ်လောက် အသက်ရပါပြီကွယ်။ သား မေမေက မာမီလိုပဲလှရဲ့လား'
'ကျွန်တော် လေးနှစ်သားမှာ မေမေဆုံးသွားတာဗျ'
'Oh My God! Sorry ပါသားရယ်။ သားလေးက သနားစရာကောင်းလိုက်တာ' စိုးစိုးကကျွန်တော့်မှာ မေမေရှိမနေတော့ခြင်းကို တော် တော်ခံစားသွားရတယ်ထင်ပါရဲ့။
နုညံ့နွေးထွေးတဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေနှင့် ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ရှုပါတယ်။
ပြီးတော့ ရုတ်တရက်ဆိုသလို သူမလက်မောင်းတွေဟာ
ကျွန်တော့်ကိုထွေးဖက်လိုက်ပြီး ကျစ်ကျစ်ပါအောင် နွေးထွေးစေရော။
နည်းနည်းလေးတော့ ကသိကအောက် နိုင်ပေမဲ့ ကြည်နူးရပါတယ်။ စိုးစိုးရဲ့မျက်မှောက်မှာ အကြင်နာနဲ့ ထွေးဖက်ခံရတဲ့ ကျွန်တော်တကယ့်သက်သောင့်သက်သာပါပဲ။ စိုးစိုးက ကျွန်တော့်နဖူးလေးကို နုညံ့တဲ့အနမ်းပွင့်ကိုခြွေပြီး ကျွန်တော့်နားရွက်နားတိုးကပ်ကာ ခပ်တိုးတိုး 'မာမီကသားရဲ့ မေမေဖြစ်နိုင်ချင်ပါရဲ့။ မာမီ..အမေတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာကြိုက်တယ်'လို့ဆိုပါတယ်။
'ဆောရီးသားရယ်....မာမီက နည်းနည်းရှေးရိုးဆန်တယ်ပြောပြော ကိုယ်ခံစားရတာကိုအမှန်အတိုင်းပြောတတ်တာ'
'မဟုတ်ပါဘူး, မာမီက တကယ့်ကို အံ့အားသင့်ဖို့ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျ' ကွဲပြားခြားနားပြီး ထူးဆန်းတဲ့ ခံစားမှုတွေ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲပြေးလွှားနေပါပြီ။
အမျိုးသမီးအစစ်များစွာထက် ပိုပြီး လှပကာ sexy ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးမဟုတ်တဲ့သူမနှင့် ကျွန်တော် ငြိမ်သက်စွာ ဆက်လက်ထိုင်နေခြင်းက ကျွန်တော့်အာသာဆန္ဒတစ်ခုခုကို စတင်နှိုးဆွလာနေတယ်။ ကျွန်တော့်ခြေထောက် တွေပေါ်သူမခြေတံ နုနုညံ့ညံ့တွေကို ကန့်လန့်ဖြတ်တင်ထားရင်း လှုပ်ရှားနေတာက
ကျွန်တော့်ပေါင်တံကို လက်နဲ့ပွတ်သပ်နေသလို ပါပဲ။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာသောက်ရမ်း မာတောင်လာပါပြီ။ ကျွန်တော် ခြေထောက်တွေကို အသာဆွဲဖယ်တင်ပျဉ်ခွေထိုင်လိုက်ရင်း 'အင်း.... ကျွန်တော် သော့ပြင်သမားကိုခေါ်ဖို့ကောင်းမယ်နော်...အချိန်နောက်ကျနေပြီ'
'ဒီည မာမီအခန်းမှာအိပ်လို့မရဘူးလား? မနက်မှသော့သွားယူပေါ့။ပိုက်ဆံကုန်သက်သာတာပေါ့ကွယ်။ ဧည့်သည်တွေအိပ်တဲ့အခန်းမှာသားအိပ်လို့ရပါတယ်' စိုးစိုးပြောခဲ့ခြင်း။
ကျွန်တော်ဘယ်ငြင်းဆန်နိုင်မလဲဗျာ။ ဧည့်သည်တွေအတွက် ထားတဲ့အခန်းကလည်းမဆိုးပါဘူး သက်သောင့်သက်သာအနားယူလို့ ရပါတယ်။
ဟူး....ကျွန်တော့်စိတ်တွေသောက်ရမ်းထန်နေပြီ မတတ်နိုင်ဘူး လက်ကစားပြီးအဆုံးသတ်ရမှာပဲ။ ငပဲကိုဘောင်းဘီထဲ လက်လျှိုပြီး ပွတ်သပ်နေစဉ်မှာပဲအခန်းတံခါးခေါက်သံတိုးတိုးနှင့်အတူ တံခါးပွင့်လာပြီး စိုးစိုးတစ်ယောက်ဝင်လာပါတယ်။ သူမ အိပ် ယာဆီကို လှမ်းလာပါတယ် အနီရောင် ခပ်ပါးပါးညအိပ်အင်္ကျီနှင့်။
အသံတိုးတိုးဖြင့်ပြောပါတယ် 'အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်ပြောပြဖို့မေ့သွားတယ် ကွယ်။
အမေကောင်းတစ်ယောက်က သားကို အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်ကောင်းကောင်းနှင့်ချော့သိပ်သင့် တယ်မဟုတ်လား' ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်း ထူအမ်းအမ်းကို သူမနုညံ့စွာနမ်းပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်တွေက ပြည့်တင်းနေတဲ့ သူမပေါင်တံတွေနှင့်တင်ပါးအစုံကို ပွတ်သပ်ပြီး တုန့်ပြန်မှုပြုလိုက်တာပေါ့။ သူမလျှာကိုရှည်လျားစွာထုတ် ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲဖိသွင်းကာ အံ့အားသင့်ဖွယ်....တမ်းတစွဲမက် ဖွယ်အနမ်းကို သင်ပေးပါရဲ့။ 'မာမီ့ပေါင်တံတွေကိုသဘောကျတယ်နှင့်တူတယ် မာမီ့ကိုယ်လုံးက လှလို့လားဟင်' သူမလျှာတွေကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲမွှေရင်း ခပ်တိုးတိုးမေးတာပေါ့နော်။
'အမ်း...ဟုတ်တယ်...အာ' ကျွန်တော့်မှာသက်ပြင်းချပြီးမှ အဖြေပေးရတယ်။
'ဒါလေးကိုရော ကိုင်ကြည့်ကွယ်' ကျွန်တော့်လက် တစ်ဖက်ကို သူမဆွဲကိုင်ပြီးရင်သားဆီနေရာချပေးတယ်။ သူမရင်သားတွေဟာ နုညံ့တယ်၊ သိပ်မကြီးပေမဲ့လက်နှင့်ပြည့်သလိုပဲ။ 'အာ...မာမီ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ အရမ်းမာနေပြီ။
လာပါ ကလေးရယ် မာမီ့နို့တွေစို့စမ်းပါ' သူမက လှိုင်းထပြီး တက်ကြွတဲ့ အသံတစ်မျိုးနှင့်ပြောတယ်။ စိုးစိုးက ခေါင်းအုံးပေါ်မှီချလိုက်တာကြောင့်
သူမနို့သီးခေါင်းတွေကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်နှင့်ထိတွေ့ရပြီပေါ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်။ ကျွန်တော် ရင်သားတွေကို တကယ့်နုနုညံ့ညံ့ထိတွေ့တယ်ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလေးတွေနှင့်ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ ခပ်မျှဉ်းမျှဉ်းစုပ်ယူလိုက်သေးတယ်။ စိုးစိုး အသက်ရှူသံတွေဟာ ပြင်းထန်ပါရဲ့။ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်လွှမ်းထားတဲ့ စောင်ကိုသူမဆွဲဖယ်ရှားပစ်ပြီးတိုးညှင်းသောအသံဖြင့် 'မာမီ့အတွက် သားမှာဘာရှိလဲကြည့်ရအောင်'
ကျွန်တော့် လိင်တံရဲ့ မာတောင်မှုဟာ အရင်နှင့်မတူ။
ခပ်ပါးပါးအတွင်းခံသာဝတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော် မြင်မကောင်းအောင်ပဲ ဘောင်းဘီကို မိုးကာတဲလိုဖြစ်နေစေတာအစွမ်းကုန်။ ကျွန်တော် စိုးစိုးရဲ့နို့သီးခေါင်းတွေကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပြီးနေလိုက်တော့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာနည်းနည်းတော့ ပေါက်ကွဲသမှုဖြစ်လာသလိုပင်။ ကျွန်တော်ဝတ်ထားသောအတွင်းခံကိုဆွဲမချွတ်သေးဘဲ အပေါ်ကနေ သူမလက်နု နုညံ့ညံ့လေးဖြင့် ပွတ်သပ်ကစားနေပါတယ်။
'အို...အကြီးကြီးပဲကွာ၊ မာမီကြိုက်တယ်၊ သားဟာတစ်ခုလုံး
မာမီ့အပိုင်ပေးနော်' သူမက စကားဆိုရင်း ကျွန်တော့်ငပဲကို အကျဉ်းထောင်ကနေလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Oh My God! ကျွန်တော့်ငပဲကို သူမ ကစားပုံကမယုံနိုင်ဖွယ်ပါပဲ။ သူမဘာလုပ်နေတယ် ဘယ်နေရာကိုကိုင်ရမယ်ဆိုတာသိနေပြီးသား။ ကျွန်တော့်လက်တွေဟာ ပေါင်တံတွေကိုပွတ် သပ်နေရာကနေပေါင်ခြံဆီအလှမ်း စိုးစိုးက သူမရဲ့လက်နှင့် အသာကိုင်ပြီး'No,အခုမဟုတ်သေးဘူးကလေးရယ်...မင်းအသင့်မဖြစ် သေးဘူး' သူမပေါင်တံတွေဆီရွှေ့တင်ပေးရင်း 'မာမီ့ပေါင်တံတွေနှင့်ကစားစမ်းပါကွယ်။ သားလက်ကလေးတွေနှင့် ပွတ်သပ်တာ ကြိုက်လွန်းလို့ပါ' တဲ့တောင်းဆိုတယ်။
နုညံ့အိထွေးတဲ့ သူမပေါင်တံအစုံက အသားဆိုင်တွေကို ဖျစ်ညှစ်ပွတ်သပ်ရတာအတော်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းသလားလို့။ ရုတ်တရက် စိုးစိုးကကျွန်တော့်ကိုတမ်းတမက်မောစွာ နှုတ်ခမ်းအစုံကို နမ်းရှိုက်ရင်း အိပ်ယာပေါ်ကိုကျောခင်းလိုက်ဖို့ သူမရင်သားအစုံနှင့် ကျွန်တော့်ကိုယ်ကို ဖိတွန်းပြီးလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းက တစ်ဆင့် လည်တိုင်၊ရင်အုပ်၊ ပြီးတော့
ဆီးစပ်ဆီကို တဖြည်း ဖြည်း သူမအနမ်းတွေက တရွေ့ရွေ့။ သူမလက်အစုံကကျွန်တော့်ငပဲကို ဘောင်းဘီပေါ်ကနေပွတ်သပ်နေရင်းမှ သူမနှုတ်ခမ်းတွေနှင့်နုညံ့စွာတို့ထိပါတယ်။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး လေထဲလွင့်နေသလိုပါပဲ။
ကြက်သီးများလည်းတဖြည်းဖြည်းထမိသလိုပဲဗျ။ ဘောင်းဘီ မျှော့ကြိုးကိုတဖြည်းဖြည်း အောက်ကိုဆွဲချတော့ပေါ်လာတဲ့ ငပဲထိပ်လေးကို လျှာနှင့်လျက်တယ်။
ပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်းစုပ်မျိုလိုက်ရင်း ဆာလောင်မွတ်သိပ်စွာ
သူမစားသောက်ပါရော။ အိုး...ဘယ်လို အမည်တပ်ရမည်မသိတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ကျွန်တော့်အကြောအချဉ်တွေထဲ က တစ်ဆင့်ခံစားရပါတယ်။
ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုန်ကာ သုက်ရည်တွေဟာ ငပဲထိပ်ကနေပန်းထွက်ဖို့ ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သူမ သိလွန်းလုပ်တတ်လွန်းပါတယ်။
'အာ...အ...အ' နောက်ဆုံး ကျွန်တော့်ခြေချောင်းလေးတွေ ကွေးညွှတ်၊ ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်စက်ကျန်တဲ့အထိ သူမလျာတွေက လျက်ပြုပါတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာရေဆေးစရာမလို သန့်ရှင်းသွားတာပေါ့နော်။ ရီဝေေ၀ ကျေနပ်တဲ့မျက်လုံးတွေနှင့်
ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုကြည့်ရင်း 'သားကြိုက်လား? ဒီလိုလုပ်ပေးတာ' မေးတယ်ဗျ။
'မာမီ မင်းရဲ့ သုက်ရည်တွေကိုကြိုက်တယ်။ မာမီ့ကို ထပ်ပြီးတိုက်နိုင်ဦးမလား သား?'
'အိုး..ရတယ်။ ကျွန်တော် တိုက်နိုင်ပါတယ်'
စိုးစိုး မတ်တပ်ထရပ် သူမလက်နှစ်ဖက်ကိုကား ရင်အစုံကိုဖွင့်ပြီး 'ဒီကိုလာပါ
ကလေးရယ်၊ မာမီ့ရင်ခွင်ထဲကို။ ဒီည မာမီ့အိပ်ရာမှာ
ကျွန်တော် အအိပ်နောက်ကျမှုမဖြစ်တော့ဘဲ နွေးထွေးတဲ့ရင်ခွင်အစုံမှာ
နှစ်ချိုက်စွာ အိပ်မောကျခဲ့ရတဲ့ညလေးပေါ့။ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို
ဖက်လှဲတကင်းနှင့် အိပ်စက်တာမျိုးကို လက်မခံတတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် အခုတော့
Lavender နံ့သင်းသင်းလေးရနေတဲ့ စိုးစိုးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာတော့
ဘာပဲပြောပြော.....စိုးစိုးလို့ခေါ်သော.နွေးထွေးတဲ့ မာမီရဲ့ရင်ခွင်ကို ကျွန်တော်......။
Alex Aung (24 Oct 2011)
Posted by Alex Aung at 3:46 PM
Gay or Lesbian ဖြစ်နေလား?